Qaabaynta gadhka: tilmaamaha ugu fiican ee lagu helo muuqaalka ugu wanaagsan | Ragga Stylish
Qaabaynta gadhka waa fikrad ay rag badani ku macneeyeen in la hagaajiyay. Maalmahan gadhka koraya maahan soo jeedin kaliya in laga tago, laakiin hadda waa moodada oo u baahan daryeel iyo daaweyn dheeri ah. Fikradda ayaa ah in la isku dayo in la bixiyo muuqaal xakamaysan, dad badan oo muuqaal caafimaad leh.
Taasi waa sababta garku u soo saaro qadarin wanaagsan dadka kale, haddii ninku leeyahay gadh gaabis ah waxay ka tarjumaysaa dhinac xun. Lqofka dhawra gadhka waa inuu muujiyaa muuqaal caafimaad leh oo nadiif ah, inaad dareentay inaad si gaar ah uga taxadartay hagaajinta iyo adeegsiga alaabada si aad u qurxiso.
Marka laga reebo dhammaan daryeelka ay tahay in la ilaaliyo si loo xaliyo gadhka caafimaadka qaba oo si fiican loo daryeelo, si ula kac ah u siiso muuqaal sax ah si bilicdeeda ay ugu habboon tahay. Taasi waa sababta aad u soo jeedineyso talaabooyin taxane ah oo lagu ogaanayo sida loo siiyo muuqaalkaas wanaagsan marka aad diyaarinaysid.
1 Falanqaynta garka talaabo talaabo ah
2 Mashiinno ama mandiillo si loo xiro garka
3 Alaabooyinka xiirashada iyo hagaajinta gadhka
Falanqaynta garka talaabo talaabo ah
Tallaabada ugu horreysa ee dhammaan waa in la helo gadh yeesho tanna waa inaan u oggolaanno inay gaarto dhererka la doonayo. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan dabeecadda mid kasta, laakiin waxa ka sarreeya oo dhan waa inaad u heshaa inaad yeelato dherer aad ku bilawdo sharraxaadda:
Tallaabo labaad ayaad awoodi kartaa bilow inaad naqshadeyso halabuurka guud ee gadhkaaga, Tan awgeed waa inaad xiirtaa dhammaan qaybaha xad-dhaafka ah ee aan ka mid ahayn naqshaddaas. Waa inaad Si taxaddar leh oo sax ah u xaddid khadka kala bixiya qoorta bilowga gadhkaaga. Qaybtani waa lama huraan maxaa yeelay hadaadan si fiican u abuurin kala bixintan, ma xiran doontid qoorta fiican.
Garka gadhka waa inuu ahaadaa mid si fiican ugu janjeedha dhegtaadaWaa in ay raacdaa xariiq toosan oo qaloocan oo laga soo bilaabo dhabarka dhegta ilaa dhammaan dhererka daankaada ilaa garka, kaas oo leh summad wanaagsan. Daar maqaalkan waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan.
Iyada oo leh mandiil gaar ah iyo jarista timaha hagaaji dhererka oo hel dhererkaas la doonayo. Waxaa jira mashiinno xukuma dherer laga bilaabo 2mm, 4mm ama ilaa 6mm. Talo ahaan, had iyo jeer way kafiican tahay inaad ka sameyso masaafada ugu dheer iskuna day inaad sameyso dhowr marin illaa wax walba lagu sharxayo isla goynta.
Muraayadda hor istaag oo ka eeg bartanka sankaaga ilaa dhinacyada dhabannadaada. Kariim timaha xiirid ku mari meelaha badan ee qaybta sare ee dhabannadaada oo iska xiir. Waa inaad u gudubtaa daabkiisa jihada timaha iyo ka soo horjeedkiisa sidoo kale ilaa aad ka hesho muuqaalka la doonayo.
Waa inaad qeexdaa sadarka biinanka, fikraddu waa in la soo koobo xarriiq qalooca oo ka socota dheg ilaa dheg. Waa inaad si fiican oo toos ah u jartaa inta u dhexeysa macbudka iyo dhegta, taas oo u dhaadhacaysa garka ka dibna u socota dhegta kale.
Iyada oo lagu gooyo saxnimada waa inaad ku qaab u yeelo gadhkaaga dhammaan meelaha la xadiday, sida aagga qoorta iyo meelaha u dhexeeya dhabannada iyo dhinacyada dhinacyada, wareegaya si isha loo siiyo habsami.
Mashiinno ama mandiillo si loo xiro garka
Suuqa waxaa ku yaal a noocyo badan oo mishiinno ah oo loo yaqaan timo jaraha ama kuwa gadhka lagu jaro. Haddii aad qaadatid shanlada hagaha waxaad heli kartaa mishiinka qaabeynta oo wanaagsan oo sicir ah waxaadna isticmaali kartaa qeybta geeska ee madaxa si aad u sameysid jaritaanno yaryar oo saxan.
Garbaha la tuuro Waxay sidoo kale waxtar u leeyihiin xiirashada iyo qaabeynta gadhka, laakiin xoogaa way ka dhib badan yihiin in la maareeyo mana caawiyaan inay si sax ah u shaqeeyaan. Hadday adiga tahay doorashadaada, isku day inaad ku dooratid wax la tuuro oo leh hal xaashi oo keliya.
Isticmaal Shavette sidoo kale waa daab aad u sax ah oo lagu calaamadiyo wareegga gadhkaaga. In kasta oo natiijadeedu ay tahay mid aan fiicnayn, haddana waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato dabacsanaan xagga maaraynteeda ah maxaa yeelay waxaad yeelan kartaa wax kabadan hal shil yar ama shil lama filaan ah.
Alaabooyinka xiirashada iyo hagaajinta gadhka
Si garka loo saaro oo loo xiiro waxaan u isticmaali karnaa xumbo xiiran ama jel. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer way fiicantahay in la isticmaalo alaabtan si loo saliido aagga una fududeeyo xiirashada, laakiin waxaan isku aragnaa dhibaatada muuqaalka.
Waxaa jira jello aan ka heli karno midab hufan sidaa darteed wax shaki ah kama lihid inaad ogaato sida loo xisaabiyo halka aad u dhaafayso daabka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa a saliida khaaska ah ee gadhka. Saliidaani waxay u shaqeysaa sida nooc ka mid ah saliidaha, waa mid hufan oo aan wax duullaan ah ku aheyn maqaarkaaga.
Hadaad rabto inaad doorato saabuun kareem ah Si aad ugu isticmaasho burush sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan, in kasta oo ay tahay hab waqti iyo lacag lagu qaato, in kasta oo natiijadeedu tahay mid cajiib ah.
Wixii goynta gadhkaaga ka dib waad u sii gudbi kartaa ku nadiifi saabuun gaar ah kuna dar qaboojiye. Markaas waan awoodnaa mari saliida gadhka gaarka ah taasi waxay ku dari doontaa fuuqbax, iftiin, nafaqeynaysa taranka timaha waxayna yareyn doontaa cuncunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Qaabaynta gadhka